झापामा १० हजार प्रदर्शनकारी उतार्ने राप्रपाको तयारी - Purwanchal Daily
प्रदर्शनको कमाण्डर राजेन्द्र लिङ्देन
लक्ष्मी काफ्ले/झापा ।
मुलुकका विभिन्न सहरमा दिनहुँजसो राजसंस्था तथा हिन्दूराष्ट्रका पक्षमा प्रदर्शन भइरहेका छन् । राजतन्त्रको अन्त्य भएको १२ वर्षपछि देशका प्रमुख सहरहरुमा पुनः राजसंस्था तथा हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा प्रदर्शन सुरु भएको हो ।
काठमाडौँ, बुटवल, पोखरा, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, धनगढी, जनकपुर, विराटनगर लगायत स्थानमा भएका प्रदर्शनमा हजारौँ सर्वसाधारणले सहभागिता जनाए । राजतन्त्रवादी दलहरु र हिन्दु राष्ट्रको माग गरिरहेका विभिन्न संस्थाहरुले स्वस्फूर्त रुपमा यसखाले प्रदर्शन गरिरहेका छन् । प्रदर्शनमा नेपाली नागरिकले उल्लेख्य साथ दिन थालेका छन् ।
प्रदर्शनले सरकार अतालियो !
देशैभर दिनहुँ हजारौँको संख्यामा प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रिन थालेपछि सरकार पनि अलमलमा देखिएको छ । अहिलेसम्म भएका प्रदर्शनमा सरकारले ठाडै हस्तक्षेप नगरे पनि आगामी कार्यक्रमहरु आयोजना हुन नदिनका लागि सरकारले रणनीति भने बनाउन थालेको छ । प्रदर्शनलाई लक्षित गर्दै गृह मन्त्रालयले देशैभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्र पठाइसकेको छ ।
प्रदर्शनकारीहरुले भने शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिँदै आएका छन् । हिन्दु राष्ट्र स्थापना र राजसंस्था पुनःस्थापनाको माग गर्दै भएको प्रर्दशनमा राज्यले दमन गरे त्यसले अर्को जनआन्दोलनको रुप लिने राप्रपा नेता राजेन्द्र लिङदेन बताउँछन् । ‘कोरोनाको समयमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अन्य नेताहरुले विभिन्न सभा–सम्मेलन गर्दै हिँड्दैछन्, जनताले गर्ने शान्तिपूर्ण प्रदर्शन रोक्न खोज्नु चाहिँ निन्दनीय बिषय हो,’ लिङ्देनले भने । प्रदर्शनले सरकार अतालिएको उनी बताउँछन् ।
झापाको प्रदर्शनको ‘फ्रन्ट लाइन’मा राप्रपा
हालसम्म भएका प्रदर्शनहरु स्वतन्त्र देशभक्त नागरिक, राष्ट्रवादी नागरिक समाज लगायत संघसंस्थाका व्यनरमा आयोजना गरियो । प्रदर्शनको अग्रपंक्तिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, विश्व हिन्दु महासंघ, केशर बहादुर विष्टको राष्ट्रिय शक्ति नेपाल, हरिवोल भट्टराईले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस (वीपी), प्रकाश कोइरालाले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस (राष्ट्रवादी) र शिवसेना नेपाल लगायत समेत छन् ।
देशव्यापी आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले झापामा भने आफैँ प्रदर्शनको आयोजना गर्दैछ । राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रका पक्षमा जनदवाब सिर्जना गर्न राष्ट्रिय पजातन्त्र पार्टी झापाले शनिबार विशाल मोटर तथा मोटरसाइकल ¥यालीको आयोजना गर्ने भएको हो । झापामा हुने वृहत् कार्यक्रममा दशौँ हजारको संख्यामा प्रदर्शनकारी उतार्ने राप्रपाको तयारी छ ।
स्वस्फूर्त रूपमा राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रका पक्षमा देशभर भइरहेको ¥यालीप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँदै राप्रपा झापाले मोटर तथा मोटरसाइकल ¥यालीको आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो । झापामा हुने प्रदर्शनको नेतृत्व संघीय सांसद् तथा राप्रपा नेता राजेन्द्र लिङ्देनले गर्दैछन् । उनी झापा क्षेत्र नम्बर–३ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् ।
राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको पुनःस्थापना, संघीयताको खारेजी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कोरोना व्यवस्थापनमा सरकारको असक्षमता, रासायनिक मलको अभावलगायत जनजिविकासँग सम्बन्धित विषयमा जनदवाब सिर्जना गर्न ¥यालीको आयोजना गर्न लागिएको लिङ्देनले बताए ।
सांसद लिङदेनले ¥यालीमा समान विचार राख्ने सबै व्यक्ति, संगठन र पार्टीलाई राष्ट्रिय झण्डा, आ–आफ्नो संस्था, संगठन र पार्टीको झण्डासहित सहभागी हुन अपिल गरेका छन् ।
यस्तो छ झापाको कार्यक्रम
शनिबार झापामा हुने प्रदर्शनका लागि जिल्लाका १५ वटै स्थानीय तहबाट नागरिकहरु पूर्वी नाका काँकडभिट्टा प्रस्थान गर्नेछन् । हरेक स्थानीय तहबाट ११ बजे ¥याली निस्कने र काँकडभिट्टा जाने बताइएको छ ।
दिउँसो साढे १२ बजे काँकडभिट्टाबाट एकीकृत ¥याली प्रारम्भ हुनेछ । साढे एक बजे बिर्तामोडमा संक्षिप्त सभासहित कार्यक्रम सम्पन्न हुनेछ प्रचारप्रसार समितिका संयोजक रञ्जित प्रसाईंले बताए । कार्यक्रममा सहभागी हुनेले मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
के भन्छन् लिङ्देन ?
‘मुलुकमा अहिलेको जुन प्रणाली छ, त्यसले देशलाई निकास दिन सक्दैन । यो साझा प्रणाली होइन । यसले जनताको भावनाको भावनाको कदर गर्न सक्दैन । नेपालजस्तो भूराजनीतिक परिस्थिति भएको मुलुकको लागि राजसंस्था आवश्यक छ ।
हामीले पहिल्यैदेखि यो प्रणालीले काम गर्न सक्दैन भनेर भनिरहेका थियौँ । त्यो अहिले सत्य सावित हुँदै आएको छ । अहिले पात्र र प्रणाली दुवै असफल हुँदै आयो । यही पात्र र प्रणालीमा गयौँ भने देश दुर्घटनामा जाने निश्चित छ । त्यसैले शान्तिपूर्ण माग भइरहेको छ ।
देशका ठूला पार्टी भन्नेहरुले यसलाई सम्बोधन गरेर सबै अटाउने सहमतिको राजसंस्था, हिन्दु राष्ट्र स्थापना गर्न सक्नुपर्छ । राजसंस्था फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यो नै मुलुकको समस्याको समाधानको एकमात्र विकल्प हुनसक्छ ।’
Previous articleबिर्तामोड २ चैतुवारीमा आगलागी हुँदा ३० लाखको क्षति
Next articleवीरता लेडी जेसीजलाई ‘जेसीज अफ द मन्थ नोभेम्बर’ को अवार्ड